झोलुंगे पुल दुई वर्षमै जीर्ण, जोखिम मोलेर यात्रा गर्छन सर्वसाधारण
कपिलवस्त । कपिलवस्तु जिल्लाको कृष्णनगर नगरपालिका वडा नं. १२ स्थित चरंगहवा नदीको झोलुंगे पुल जीर्ण भएपछि यहाँका बासिन्दाहरु जोखिम मोलेर यात्रा गर्दछन । पुल अड्याउन निर्माण गरिएको पर्खालसँगैको ‘फाउण्डेन’ बाढीले भत्काएपछि स्थानीय बासिन्दाहरु जोखिम मोलेर यात्रा गर्न बाध्य भएका हुन । योे क्षेत्रमा पर...
गोरखा आयुर्वेद कम्पनीका उत्पादन युरोप...
भाद्र ७, 2074 गोरखा। सदरमुकामको हरमटारीमा सञ्चालित गोरखा आयुर्वेद कम्पनीका उत्पादन युरोपका बिभिन्न देशमा निर्यात हुने गरेका हुन् । कम्पनीले आयुर्वेदिक औषधि र चियालगायत सामग्रीलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै आएको छ । जंगलमा खेर गएका विभिन्न जडीबुटी कच्चापदार्थ प्रयो...
बाढीपहिरोले कारण १८ सिँचाइ आयोजनामा क...
भाद्र ७, 2074 सप्तरी । जिल्लामा सञ्चालित विभिन्न १८ वटा सिँचाइ आयोजना पूर्णरुपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् । सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय सप्तरीद्वारा सञ्चालित नयाँ र पुरानो सिँचाइ आयोजना क्षतिगस्त हुँदा करिब ४० करोड बराबरको क्षति भएको छ । ...
खाद्यान्न जुटाउन तिव्वत जाने तयारीमा ...
भाद्र ७, 2074 गोरखा । दैनिक उपभोग्य सामान किनमेलका लागि उत्तरी गोरखावासी तिव्वत जाने तयारीमा जुटेका छन् । वर्षमा एक महिनाका लागि मात्र खोलिने तिव्वत नाका खुल्ने सयम नजिकिएसँगै उनीहरु तिव्वत जाने तयारीमा जुटेका हुन् ।अहिले स्थानीयहरु पै...
प्रधानमन्त्री देउवालाई स्वागत
भाद्र ७, 2074 नयाँदिल्ली । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारतको ५ दिवसीय राजकीय भ्रमणको क्रममा केही समयअघि नयाँ दिल्ली आइपुगेका छन् । आफ्ना भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा धर्मपत्नी सांसद डा. आरजू राणा देउवाका स...
६ लेन सडक निर्माण कार्य सुरु
भाद्र ७, 2074 धनगढी,। धनगढी उपमहानगरपालिकाको मोहनापुलदेखि गोदावरी नगरपालिकाको अत्तरिया चोकसम्मको सडकलाई ६ लेन‘को बनाई स्तरोन्नती गर्ने कार्य सुरु गरिएको छ । मोहनापुल—अत्तरिया सडक आयोजनाका प्रमुख नवीनमान श्रेष्ठले हाल प्रारम्भिकचरणमा उक...
भाद्र ७, 2074 भक्तपुर । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले धार्मिक पर्यटनको विकासका लागि एकजुट हुनुपर्ने बताएकी छन् । भक्तपुरको डोलेश्वर महादेव मन्दिरको श्रावणी मेला समापन तथा डोलेश्वर महादेव मन्दिर व्यवस्थापन समितिको नवौं वाषिर्कत्सवमा ब...
भाद्र ७, 2074 चितवन । जिल्लाका २ हजार ४ सय ३५ जना भूकम्प पीडितले पहिलो किस्ताबापतको रकम बुझेका छन् । पहिलो किस्ताबापत प्रतिपरिवार ५० हजार भूकम्प प्रभावितलाई रहात रकम वितरण गरिएको जिल्ला समन्वय समितिले जनाएको छ । जिल्लामा भूकम्पका कारण ७ हजार ३ सय ३४ घर पूर्ण र...
सुनसरीका मृतक परिवारलाई राहत प्रदान
भाद्र ७, 2074 इनरुवा । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले एक साता अगाडि आएको बाढीका कारण ज्यान गुमाएका मृतकका परिवारलाई राहत रकम उपलब्ध गराएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालप्रसाद पराजुलीसहितको टोलीले मृतकका परिवारलाई भेटेर सरकारी राहतब...
आकाशमुनि पढेका विद्यार्थीलाई सेनाले ब...
भाद्र ७, 2074 रोल्पा। उत्तरी रोल्पाको थवाङमा रहेको वीर बलभद्र माध्यमिक विद्यालय जिल्लाका दशवटा पुराना माध्यमिक द्यालयमध्ये एक हो । २०३५ सालमा स्लेट ढुंगाले छाएर बनेको भवन पुरानो भएका कारण कतिबेला भत्कने हो भन्ने चिन्ता थियो, विद्यालय प...
डलर तस्कर पाइलट विदेश तालिममा
भाद्र ७, 2074 काठमाडौं । राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमले विदेशी मुद्रा अपचलन मुद्दामा धरौटीमा छुटेका वरिष्ठ पाइलट (क्याप्टेन) सुवर्ण अवालेलाई लाखौं खर्च गरेर तालिमका लागि विदेश पठाएको छ । वरिष्ठ क्याप्टेन अवालेको उडान लाइसेन्स अद्यावधिक गर्न लाखौं खर...
नेपालगन्जमा तेत्तीस किलो चरेससहत चार ...
भाद्र ७, 2074 नेपालगन्ज । मध्यपश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी अनुसन्धान ब्युरोबाट खटिएको प्रहरी टोलीले नेपालगन्ज सल्यानीबागस्थित एक घरमा छापा मारेर ठूलो परिमाणमा लागुऔषध चरेस बरामद गरेको छ । प्राप्त सूचनाका आधारमा प्रहरी निरीक्षक अरुणकुमार सिंहको नेतृत्वमा खटिएको प्रह...
निगम जग्गा खरिद अनियमितता अध्ययन गर्न...
भाद्र ६, 2074 भैरहवा । आयल निगम जग्गा खरिद अनियमितताबारे अध्ययन गर्न संसदीय टोली भैरहवा पुगेको छ । व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गतको उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समिति मातहतको आपूर्ति उपसमितिले पेट्रोलियम भण्डारणका लागि नेपाल आयल निगमले खरिद गरेको विवादस...
भाद्र ६, 2074 काठमाडौ। राष्ट्रिय सहकारी संघले प्रधानमन्त्री राहत कोषलाई रु २५ लाख प्रदान गरेको छ । सो संस्थाले यसअघि भूकम्पपीडितका लागि रु २५ लाख प्रदान गरेको थियो । उक्त रकम संघको प्राकृतिक विपत्ति उद्धार कोषबाट प्रधानमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरिएको हो । साउन २...
← अघिल्लो 12… 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 … 1093 1094 पछिल्लो →